दोलखाबाट असारसम्म ५५६ मेगावाट विद्युत् थपिने | News Dainik
News desk १३ माघ २०७६, सोमबार ११:४० उर्जा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैं । दोलखामा निर्माणाधीन सात जलविद्युत् आयोजनाबाट चालू आर्थिक वर्षभित्रै ५५६ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिने भएको छ । यी सबै आयोजनाको काम हालसम्म ९० देखि ९९ प्रतिशतसम्म पूरा भएको छ । आयोजनामा कुनै अवरोध नभए चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूरा भइ विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
घट्टे खोला, तल्लो खारे र सिंगटी प्रसारण लाइन नै कुरेर बसेका छन् । प्रसारण लाइन भएको भए यि आयोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिसक्थे । सिंगटी खोला विगू गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिका सिंगटी बजारनजिकै छ । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ चुचुरे र दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नं. १ श्यामामा निर्माणाधीन माथिल्लो खिम्ती खोला १ र २ को १९ मेगावाटको जलविद्युत् अयोजनाको प्रगति पनि ९० प्रतिशत बढी छ ।
हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यि दुवै आयोजना गर्जाङ सव स्टेशनमा जोड्ने लक्ष्य छ । तर गर्जाङ–खिम्ती १३२ केभीको प्रसारण लाइन र सव स्टेशनको काम समयमा पूरा नहुँदा यि आयोजनाको उत्पादन पनि असर गर्छ । खानी खोला, घट्टे खोला, तल्लो खारे खोला र सिंगटी खोलाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भने सिंगटी सब स्टेशनमा जोडिन्छ । यी आयोनाका लागि सिंगटी लामोसाँघु प्रसारण लाइन र गर्जाङ–खिम्ती प्रसारण लाइनको काम जग्गासम्बन्धी विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । काराेबार दैनिकबाट
अघिल्लॊ गण्डकी विकास बैंकद्धारा शैक्षिक सामाग्री तथा न्यानो कपडा बितरण
पछिल्लॊ ओखलढुङ्गामा जीप दुर्घटना, एकको मृत्यु, तीन घाइते